IOU1 စျေး - အွန်လိုင်း IOU ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို IOU1 (IOU)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ IOU1 (IOU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ IOU1 ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ IOU1 တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
IOU1 များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
IOU1IOU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00307IOU1IOU သို့ ယူရိုEUR€0.00259IOU1IOU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00234IOU1IOU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0028IOU1IOU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0276IOU1IOU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0193IOU1IOU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0681IOU1IOU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0114IOU1IOU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00409IOU1IOU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00425IOU1IOU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0688IOU1IOU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0238IOU1IOU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0164IOU1IOU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.23IOU1IOU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.518IOU1IOU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00421IOU1IOU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0046IOU1IOU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0955IOU1IOU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0214IOU1IOU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.324IOU1IOU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.64IOU1IOU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.16IOU1IOU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.225IOU1IOU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0851
IOU1IOU သို့ BitcoinBTC0.0000003 IOU1IOU သို့ EthereumETH0.000008 IOU1IOU သို့ LitecoinLTC0.00005 IOU1IOU သို့ DigitalCashDASH0.00003 IOU1IOU သို့ MoneroXMR0.00003 IOU1IOU သို့ NxtNXT0.222 IOU1IOU သို့ Ethereum ClassicETC0.000432 IOU1IOU သို့ DogecoinDOGE0.855 IOU1IOU သို့ ZCashZEC0.00003 IOU1IOU သို့ BitsharesBTS0.118 IOU1IOU သို့ DigiByteDGB0.112 IOU1IOU သို့ RippleXRP0.0101 IOU1IOU သို့ BitcoinDarkBTCD0.000103 IOU1IOU သို့ PeerCoinPPC0.0108 IOU1IOU သို့ CraigsCoinCRAIG1.37 IOU1IOU သို့ BitstakeXBS0.128 IOU1IOU သို့ PayCoinXPY0.0524 IOU1IOU သို့ ProsperCoinPRC0.377 IOU1IOU သို့ YbCoinYBC0.000002 IOU1IOU သို့ DarkKushDANK0.963 IOU1IOU သို့ GiveCoinGIVE6.5 IOU1IOU သို့ KoboCoinKOBO0.673 IOU1IOU သို့ DarkTokenDT0.00283 IOU1IOU သို့ CETUS CoinCETI8.67